Izizathu ezi-7 zokusebenzisa iVPN kwi-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Izizathu ezi-7 zokusebenzisa i-VPN kwi-Android
UDaniPlay | 26/06/2021 10:00 | Izaziso
Uninzi lwabantu abathi ethubeni bathathe isigqibo sokusebenzisa iVPN. Enkosi ngobukho bazo, unokufikelela kwinethiwekhi yekhompyuter ukuze ube nolwandiso olukhuselekileyo lwenethiwekhi. Oku kubulela kunxibelelwano lwenqaku lendawo ngamanqaku kunxibelelwano oluzinikeleyo nolufihliweyo.
Ukukhetha i-VPN kufuna ukuchitha ixesha elincinci, kuba ezasimahla zibonakalise ukuba aziloncedo kubasebenzisi abazisebenzisayo. Kufanelekile ukuba uhlawulelwe ukhuseleke xa uhamba ngolwandle, Sebenzisa amaqonga okusasaza okanye uphephe iigeoblocks.
Enye yezo bezizuza umhlaba kule minyaka idlulileyo nguNordVPN, iVPN esemgangathweni ngexabiso eliphantsi kunye nokusebenza okuphawuleka ngokwenene kwabanye. Iyahambelana namaqonga anjengeNetflix, i-HBO, iDisney + kunye nezinye iinkonzo zokusasaza ezikhoyo namhlanje.
Esinye sezizathu zokusebenzisa i-NordVPN icandelo lokhuseleko, ukukwazi ukufikelela kwiwebhusayithi apho bekukho ukusikelwa umda ngaphambili, njengaxa uzama ukufikelela kumxholo weNetflix ovela kweminye imimandla. I-VPN ibalulekile ukuba ufuna ukufikelela kwiindawo ngokukhuselekileyo ngaphandle kokonakalisa idatha yakho.
Zine iindidi zeVPN, eyokuqala kukufikelela kude kweVPN, okwesibini kukukhomba kwi-VPN, okwesithathu kulungiswa, kwaye eyesine yiVPN ngaphezulu kweWAN. Okokugqibela kukusasazeka okuncinci, kodwa lukhetho olunobuzaza, nangona ezi zintathu zokuqala zisebenza.
2 Ukufikelela kwiNetflix evela kwimimandla eyahlukeneyo
5 Iqonga elininzi
6 Inkonzo yomthengi
Okokuqala nokuphambili xa usebenzisa i-NordVPN kukhuseleko, iiseva azisebenzisi idiski enzima, ngakumbi isebenzisa i-RAM. Akukho nto igciniweyo, iiseva ezibekiweyo zezazo kwaye ziya kusebenza njengetonela xa kufikelelwa kumaphepha kunye neenkonzo.
I-encryption eyisebenzisayo yi-AES-256, yenye yezona ndlela zikhuselekileyo zokubhala ngokufihlakeleyo namhlanje. Ngokutsho kweengcali, okwangoku akunakwenzeka ukuyaphulaNangona ii-ISPs okanye abahlaseli bengayi kuba nakho ukuyifunda, nokuba babenako ukuyifumana. I-AES-256 siskimu sokubethela ibhloko esamkelwe njengomgangatho wokubhala ngurhulumente waseUnited States.
Ukufikelela kwiNetflix evela kwimimandla eyahlukeneyo
Ukuvulwa kwe-Geo yenye yamandla eNordVPN. Umzekelo, ukuba ufuna ukufikelela kumxholo ovela e-USA, kuya kufuneka unxibelelane neseva ekwelo lizwe. Uninzi lothotho olufumanekayo ngaphambi kokuba liguqulwe kwaye lubekwe kwiNetflix eSpain.
Amanyathelo okuphumeza oku alula, kuba oku kuyimfuneko ukukhuphela usetyenziso, ukubhalisela inkonzo, qhagamshela kwiseva yaseMelika, ungene kwiNetflix kwaye yiyo kuphela. Inokudityaniswa kweminye imimandlaUmzekelo, umxholo wase-United Kingdom yenye yezona ziqwalaselwe kakhulu kwimihla yakutshanje.
Elinye inqaku lokuxabisa xa usebenzisa iVPN isantya, ngeNordVPN isantya esikhawulezayo kwintengiso siqinisekisiwe. Ukwenza oku, kufuneka ukhethe iseva eqinisekisa ukusebenza ngesantya esiphezulu, kuyimfuneko ukulahla iiseva ezigcweleyo ngamava amahle. I-NordVPN yenye yeeVPN ezikhawulezayo kwintengiso, zonke emva kokudibana nohlalutyo olwahlukeneyo lwenkampani yaseJamani i-AVTEST.
I-VPN ekhawulezayo yeyona ihlaziya iiseva zayo, ke isiqinisekiso sesantya sisiqinisekiso sokukwazi ukubukela nawuphina umxholo ngaphandle kokusika okanye ukuyeka. Kule NordVPN iphambi kokhuphiswano lwayo Kwaye uya kuba nakho ukubona ividiyo bukhoma ngaphandle kwengxaki.
Cofa apha kwaye ufumane isibonelelo sexesha elinganiselweyo le-NordVPN kwi-72% yesaphulelo kunye neenyanga ezi-3 zesipho nge- € 2.64 kuphela ngenyanga.
Ukuphunyezwa kweNordLynx kwenze ukuba iVPN ifumaneke yoqhagamshelo lwe-ultrafast kunye nokuqinisekisa ubumfihlo kwiindawo ezifikelela kumsebenzisi. Ngumqolo we-WireGuard, isizukulwana esilandelayo se-tunnel isisombululo esisebenze kakuhle kwi-Linux, Windows, Android, iOS kunye ne-MacOS ukususela ekuphunyezweni kwayo.
I-NordLynx iyakhawuleza, konke kubulelwe iminyaka yokusebenza ne-WireGuard, umthetho olandelwayo onemigca engama-4000 yekhowudi, malunga namaxesha ali-100 ngaphantsi kwezinye iinkqubo. Kulula ukuyiphumeza, ukongeza ekunikezeleni ngenkonzo eqinisekisiweyo ukusebenza kunye nokufezekisa ukufikelela kweVPN.
I-NordVPN yenze umtsi kuwo onke amaqonga okubonelela kunye nokubonelela kubasebenzisi bayo bonke ngamava afanayo, nokuba kungokukhangela okanye ukuchitha usasazo, phakathi kwezinye izinto ezininzi. Iyafumaneka kwiinkqubo zokusebenza ze-iOS, i-Android, iWindows, iMac Os, iLinux kunye ne-Android TV.
Ngokurhuma, kukho izixhobo ezi-6 ezinokonwabela ukhuseleko lokukhangela kwi-NordVPN, ukufihla idilesi ye-IP kunye nokubethela ukugcwala. Oku kulula njengokungena ngemvume kunye nesicelo kunye nokudibanisa kwi-Intanethi. ngaphandle kokukhathazeka xa ungena ngaphandle kwe-IP yenkampani onxibelelana nayo.
Elinye lamanqaku abalulekileyo enkampani kufuneka ibe yinkonzo yabathengi. Ihlala isonjululwa ngemibuzo ebuzwa rhoqo kunye namathandabuzo, nangona i-NordVPN inenkonzo yabathengi yeeyure ezingama-24, iintsuku ezisi-7 ngeveki, ukusombulula nakuphi na ukuthandabuza okungavela ngelo xesha.
Inkxaso yenziwa ngeendlela ezintathu, eyokuqala kukutyelela iZiko loNcedo, okwesibini kukuncokola bukhoma nengcali evela kwinkampani kwaye okwesithathu kukuthumela i-imeyile. Nasiphi na kwezi zintathu zivumelekile, okwesibini yenye yezona zisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi.
Inkonzo enokusetyenziswa ngaphandle kwemida inexabiso eliphantsi ngokwenene, ukongeza ekunikezeleni ngokhuseleko, isantya kunye nokulungela nasiphi na isixhobo namhlanje. Ngaphantsi kwee-euro ezingama-10 unenkonzo yenyanga, ufumana Iipesenti ezingama-72% ukuba uqesha isicwangciso seminyaka emibini ngoku nokufumana iinyanga ezi-3 zesipho sasimahla.
Ukuba ujonga izixhobo ezi-6 eziza kuba nakho ukufikelela eqongeni, lixabiso eliphantsi kakhulu kuba linakho ukunxibelelana ngaphezulu kweeseva ezingama-5.500. Ukongeza, i-NordVPN ikwabonelela ngenkonzo yelifu Ukulayisha iifayile kwaye uzigcine zikhuselekile, konke kubhalwe ngokufihlakeleyo kwedatha ngexabiso le-2.64 ngenyanga.
Ke sukungaluhoyi ukhuseleko lwakho kwi-Intanethi kunye nemfihlo: Cofa apha kwaye ufumane ixesha elilinganiselweyo: I-NordVPN kwi-72% isaphulelo kunye neenyanga ezi-3 simahla nge- € 2.64 kuphela ngenyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Izizathu ezi-7 zokusebenzisa i-VPN kwi-Android
Imidlalo emi-5 ongenakukuphosa kwiselfowuni yakho ye-Android
Izicelo ezili-11 ezilungileyo zokuchonga iintlobo zeenja